» रबि लामिछाने पुगे भागरथिको घरमा ,चुप लागेर बस्दैनौ भन्दै सडकमा उत्रिए !न्याय दिलाएरै छोड्छौ! भन्दै यसरी गर्जिए ! हेर्नुजोस भिडियो रबि लामिछाने पुगे भागरथिको घरमा ,चुप लागेर बस्दैनौ भन्दै सडकमा उत्रिए !न्याय दिलाएरै छोड्छौ! भन्दै यसरी गर्जिए ! हेर्नुजोस भिडियो – हाम्रो खबर
रबि लामिछाने पुगे भागरथिको घरमा ,चुप लागेर बस्दैनौ भन्दै सडकमा उत्रिए !न्याय दिलाएरै छोड्छौ! भन्दै यसरी गर्जिए ! हेर्नुजोस भिडियो
2021, February 9th, Tuesday
रबि लामिछाने फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्छन् : भागरथीको न्याय को निम्ति उठिरहेका आवाजहरुलाई थप बल मिल्छ कि भन्दै बैतडी तर्फ जादैछौ।अबका अपडेटहरु, केही समयकालागि फेसबुक बाटै..
यो स्ट्याटस् सार्वजनिक गरेसगै रवि लामिछाने र दिपक बोहोरा बैतडि लागेका हुन् ।त्पतिमात्रै हैन माइतिघरमन्डलामा समेत विभिन्न मुलधारका सामाजिक अधियन्ताले समेत भागरथिको न्यायको लागि आवाज बुलन्द गरेका छन् ।अहिले रवि लामिछाने भागरथिको घरमा पुगेर यस्तो दम्दार भाषण दिएका छन् अब चुप लागेर बस्न नसक्नेे भन्दै सडकमा उत्रिने समेत विस्वास दिलाएका छन् ।
कक्षा १२ मा अध्ययनरत भागरथीकाे बैतडीको दोगडाकेदार-७ मा वि`भ`त्स ह`त्या`को अनुसन्धान तथा निरीक्षणका लागि सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदी आफैं घ`ट`नास्थलमा पुगेका थिए । चुडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको ह`त्या अनुसन्धान सुपरीवेक्षणका लागि सुवेदी आइतबार त्यहाँ पुगेका हुन् ।
प्रदेश प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक ‘एसएसपी’ मुकेश सिंहका अनुसार सुवेदी आइतबार बिहानै त्यसतर्फ गएका हुन् । घ`ट`नाको छानविनका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक ‘डीआईजी’ सुवेदीले शुक्रबारै प्रदेशका अर्का एसएसपी जनकराज पाण्डेलाई पनि खटाइसकेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ को टोली पनि खटाइसकेको थियो । कञ्चनपुरको निर्मला ह`त्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि खटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ‘डीएसपी’ पञ्चकुमार बाखु नेतृत्वको टोलीलाई बैतडी पनि पठाइएको थियो ।
गत बुधवार दिउँसो घरबाट करिब ५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ चडेपानीकी स्थित सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा फर्किने क्रममा भागरथी बे`पत्ता भएकी थिइन्। भोलिपल्ट नजिकैको जङ्गलमा उनको श`व फेला परेको थियो। श`व घर र विद्यालयको करिब बिच भागमा रहेको जङ्गलमा भेटिएको हो।